Yintoni Oya Kuyifumana Kwiintlanganiso ZamaNgqina KaYehova?
Abantu abaninzi baye bayeka ukuhamba icawa ngenxa yokuba abazifumani iimpendulo kweyona mibuzo ibalulekileyo abanayo okanye intuthuzelo. Ngoko ke, kutheni ufanele uye kwiintlanganiso zamaNgqina kaYehova? Yintoni oza kuyifumana apho?
Uvuyo lokuba kunye nabantu abanothando. Ngenkulungwane yokuqala, kwasekwa amabandla apho amaKristu ayeza kunqula uThixo, afunde iZibhalo aze akhuthazane. (Hebhere 10:24, 25) Apho ayeziva ekhululekile kunye nabahlobo bokwenene—abazalwana bawo abangamaKristu. (2 Tesalonika 1:3; 3 Yohane 14) Silandela loo mzekelo wawo yaye nathi siyavuya.
Ingenelo yokufunda indlela yokusebenzisa imigaqo yeBhayibhile. Njengokuba kwakunjalo ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, amadoda, abafazi kunye nabantwana bahlanganisana ndawonye. Abafundisi abafanelekayo basebenzisa iBhayibhile ukuze basincede siqonde indlela esinokuyisebenzisa ngayo imigaqo yayo ebomini bethu. (Duteronomi 31:12; Nehemiya 8:8) Wonk’ umntu unokuba negalelo kwiingxubusho ezenziwa nabaphulaphuli nasekuculeni, ebonisa ithemba esinalo njengamaKristu.—Hebhere 10:23.
Ukholo lwakho kuThixo luza komelezwa. Umpostile uPawulos waxelela elinye ibandla oku: “Kuba ndilangazelela ukunibona, . . . ukuze sikhuthazane elukholweni, olwenu kunye nolwam.” (Roma 1:11, 12) Xa sikunye namanye amaKristu kwiintlanganiso ukholo lwethu luyomelela size sizimisele ngakumbi ukuphila ngemigaqo yeBhayibhile.
Kutheni ungakhe uziphe ixesha uye kuzibonela oku kwiintlanganiso zethu? Uya kwamkelwa ngobubele. Kungenwa simahla—akukho nkongozelo.
Nguwuphi umzekelo esiwuxelisayo kwiintlanganiso zebandla?
Singenelwa njani ngokuya kwiintlanganiso zamaKristu?
Ukuba ufuna ukubona iHolo yoBukumkani okufutshane kuyo ngaphambi kokuba uye kwiintlanganiso zethu, cela elinye iNgqina likaYehova likubonise.
Khangela indawo esihlanganisana kuyo nendlela esinqula ngayo.